१२:३१, १५ अगस्ट २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन
१५ bytes added , ९ वर्ष अघि
भाषामा देखिएका अशुद्ध शव्दहरु र हिज्जे सुधार्ने शुद्धिकरण कार्य, replaced: परंपरा → पर using AWB (7794)
२०:३४, १४ अगस्ट २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
(शुद्धिकरण using AWB (7794))
१२:३१, १५ अगस्ट २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
<includeonly>क्रिया र फलको संबंध [[कार्य-कारण-भाव]] को अटूट नियममा आधारित हो। यदि कारण विद्यमान हो त कार्य अवश्य हुनेछ। यो प्राकृतिक नियम आचरण को क्षेत्रमा पनि सत्य हो। अत: भनिन्छ कि क्रियाको कर्ता फलको अवश्य भोक्ता हुन्छ। बौद्धोंले कर्ता को क्षणिक माना हो तर यस नियम को चरितार्थ गर्नको लागि उनी क्षणसंतानमा एक प्रकार को एकरूपता मानते भएका भन्छन्ं कि एक व्यक्ति को संतान दोस्रो व्यक्ति को संतान से भिन्न हो। क्षणभेद होने भन्दा पनि व्यक्तित्वमा भेद हैन होता; अत: व्यक्ति पूर्वनिष्पादित क्रियाको उत्तर कालमा भोग करता नै हो। यिद हामी यो न मानें त भन्न पडेगा कि कुनै दोस्रो को द्वारा को गई क्रियाको फलको कुनै दोस्रो भोगता हो जुन तर्क विरुद्ध हो। यदि यस नियममा पूर्ण आस्था हो त तर्क हामीलाई यसको एक अन्य निष्कर्ष को पनि स्वीकार गर्नको लागि बाध्य गर्छ। यदि सबै क्रियाओंको फल भोगना पर्दछ त उनि क्रियाओंको के हुनेछ जसको फल भोगने को पहिले नै कर्ता मरछ? या त हामीलाई कर्म को सिद्धांतलाई छोडन हुनेछ या फिर, मानना हुनेछ कि कर्ता हैन मरता, त्यो केवल शरीर को बदल दिइन्छ। भारतीय विचारकोंले एक स्वर से दोस्रो पक्ष नै स्वीकार गरेको छ। उनी भन्छन्ं कि मरन शरीरको स्वाभाविक कर्म हो, तर भोग को लागि यो आवश्यक छैन कि त्यहि शरीर भोगे जसले क्रिया को हो। भोक्ता अलग हो र त्यो कर्मफलको भोग गर्नको लागि दोस्रो शरीर धारण गर्छ। यसै को पुनर्जन्मवाद भन्छन्ं। मृत्यु शरीर को आनुषंगिक स्वाभाविक क्रिया हो जसको कर्ममा कुनै प्रभाव हैन होता। अत: कर्म को सिद्धांतलाई पुनर्जन्म से अलग गरेर हैन राखयो जा सकता।
इतना नै हैन, जब क्रियाको संबंध फलभोग संग मानिन्छ तब यो पनि मानना पडेगा कि भोग-जो शुभ अशुभ कर्महरु को अनुसार सुखमय या दु:खमय हुन्छ-अवश्यंभावी हो। उससे बचा हैन जा सकता, न त उनलाई बदला जान सक्छ। फल को क्षयको एकमात्र उपाय हो उनलाई भोग लिन। यस जन्ममा प्राणी जस्तो हो उनको पूर्व जन्मों को क्रियाओंको फल मात्र हो। फल एक शक्ति हो जुन जीवन को स्थिति को नियंत्रितनियन्त्रित गर्छ। यस शक्तिको पुंज पनि कर्म भनिन्छ र केहि मान्छे यसलाई भाग्य या नियति पनि भन्छन्ं। नियतिवादमा मानिएको छ कि प्राणी नियति से नियंत्रितनियन्त्रित अत: परवश हो। त्यो स्वयं केहि हैन करता। तर पूर्वजन्मों को क्रियाको फल भोगने को वाहेक त्यो यस जन्ममा स्वतंत्रस्वतन्त्र कर्ता पनि हो, अत: पूर्व कर्महरुलाई भोगने संग नै त्यो भविष्य को लागि कर्म गर्छ। इसीमा उनको स्वातंत््रय हो। आचार को लागि स्वतंत्रतास्वतन्त्रता परमावश्यक हो र प्राय: सबै भारतीय दार्शनिक यसलाई मानते छन्। क्रिया, क्रियाफल तथा क्रियाफलको समूह, जसलाई अदृष्ट पनि भन्छन्ं, भारतीय दर्शनमा कर्म शब्दबाट अभिहित हुन्छ।
पहिले भन्ाइएको छ कि मन:प्रेरणा कर्मको आवश्यक उपकरण हो। मन:-प्रेरणा को शुभ या अशुभ हुन बाट नै कर्म शुभ या अशुभ हाता हो। डाक्टर रोगी को भलाई को लागि उनको चीरफाड गर्छ। यदि यस चीरफाड से रोगी को कष्ट हुन्छ त डाक्टर उनको उत्तरदायी छैन। डाक्टर शुभ कर्म गरेर रहेको छ । अत: दु:ख, जुन अशुभ मन:प्ररेणा से को गई क्रियाको फल हो, त्यतिखेर टाढा हुन सक्छ जब मन को अशुभ प्रभावों से बचाया जाए। सर्वदा शुभ कर्म गर्न सर्वदा शुभ सोचने देखि नै हुन सक्छ। कष्ट को बचनेको यही एक उपाय हो। तर शुभ कर्म गर्नवालाहरु व्यक्ति को फलभोग को लागि जन्म लिन नै हुनेछ, चाहे स्वर्गमा, चाहे पृथ्वी पर। जन्म लिन आफ्नो तपाईंमा महान्‌ कष्ट हो किनकी जन्मको संबंध मृत्यु से हो। मृत्युको कष्ट दु:सह कष्ट मानिएको छ। अत: यदि यस कष्ट भन्दा पनि छुटकारा पान हो त जन्म को परंपरापरम्परा को पनि समाप्त गर्न हुनेछ। यसको लागि शुभ कर्महरुको पनि परित्याग आवश्यक हो किनकी बिना उनको जन्म से मुक्ति छैन। अत: शुभाशुभ परित्यागी नै वास्तविक दु:खमुक्त हुन सक्छ।
क्या शुभाशुभ परित्याग संभव छ? शरीर रहते यो संभव हैन मालूम होता। मा एक उपाय हो। मन को शोधन से यो सिद्ध हुन सक्छ। यदि मनमा कुनै फल को आकांक्षा को बिना, पलक उठन गिरने जस्तै, सारी क्रियाएँ स्वाभाविक रूपबाट को जाएँ त उनसे शुभ अशुभ फल उत्पन्न हुनेछैनन् र जन्म मृत्यु भन्दा पनि छुटकारा मिल जाएगा। निष्काम कर्मको यही आदर्श हो। यसको विपरीत सारा कर्म-जो शुभ अशुभ हुन्छन्-सकाम कर्म हों र उनी बंधन को कारण हों।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/153314" बाट अनुप्रेषित